ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာဟာရီယာများ | တိုယိုတာဟာရီယာကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
Off-Road Vehicle / Suv (78)
Cassette Radio (33)
Black Toyota Harrier 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးက...
Black Toyota Harrier 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Harrier 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Harrier 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl Gold Toyota Harrier 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Black Toyota Harrier 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 504 ညှိနှိုင်း
Pearl Gold Toyota Harrier 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Lks 1,020 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Harrier 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Silver Toyota Harrier 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Silver Toyota Harrier 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Black Toyota Harrier 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push St...
Silver Toyota Harrier 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Airbag: ...
Pearl White Toyota Harrier 1998 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Pearl White Toyota Harrier 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver,Air...
Silver Toyota Harrier 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေး...
အမြင့်ကား အိမ်စီးတွေထဲက အရောင်းရဆုံး ဟာရီယာများ
ဟာရီယာကားတွေဟာ ၀ဘ်ဂွန်၊ ဟတ်ဘတ်နဲ့ ခရီးသည်တင် ယာဉ်တွေဆီမှ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အစ်ယူဗီ အစိတ်အပိုင်းကနေ အနည်းငယ်မြင့်မားတဲ့ ဒီဂရီဖြစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ကားတွေ ဖြစ်ပြီး စီယူဗီ မျိုးနွယ်ဝင်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြီးရီးယားနဲ့ အမေရိကမှာ ရှိတဲ့ စံနှုန်း ဆိုဒ်နဲ့တူညီပြီး ကွန်ပတ်ကားတွေထက် ကြီးနိုင်သလို။ တူညီတဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်တွင်းမှာလည်း ၀ယ်ယူ စီးနင်း အသုံးပြုမှုတွေ ရှိပါတယ်။
တိုယိုတာကနေ ၁၉၉၇ ကနေ စပြီး ဂျပန်မှာ စတင်ရောင်းချခဲ့ပြီး လပ်ဆပ် အာအိတ်ခ်ျလို့လည်း နာမည် နောက်တစ်မျိုးဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်လောက်မှာ ပြည်ပကို ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ တိုယိုတာက ဌင်းရဲ့ ဂျပန် ၀ယ်ယူသူတွေကိုတော့လပ်ဆပ် ဘရန်ကို မရောင်းပါဘူး။ တိုယိုတာ ဟာရီယာရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်ကိုတော့ ၂၀၀၃ မှာ စထုတ်ပါတယ်။ လပ်ဆပ်တွေကိုတော့ အိတ်ခ်ျစပို့ ဈေးကွက်အတွက် တူညီစွာနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယမျိုးဆက် လပ်ဆပ် အာအိတ်ခ်ျကတော့ ၂၀၀၈ နောက်ပိုင်းမှာ ရောက်လာပါတယ်။ ၂၀၁၃ မှာ ဌင်း ဟာရီယာကို နောက်ထပ် ဒီဇိုင်းပြန်ဆန်းသစ်ထားပါတယ်။ မျိုးဆက်တွေ လိုက်ပြီး ရုပ်တွေ ပြောင်းသွားပါတယ်။ ၂၀၁၃နဲ့ ဌင်းရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာကြီးကို ဒီဇိုင်းကပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ ဒီိဇိုင်းပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာ အပြင်ပိုင်း ဒီဇိုင်းတွေအပြင် အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းနဲ့ အင်ဂျင် ဖွဲ့စည်းမှု၊ စတဲ့ ပြောင်းလဲမှုများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ပထမမျိုးဆက်နဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက် နှစ်ခုကို အများဆုံး တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးထွက် မော်ဒယ်ကိုလည်း တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟာရီယာတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် စွမ်းဆောင်ရည်တွေက မဆိုးပါဘူး။ သုညမိုင်ကနေ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း ပြေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်မှာ ၂၄၀၀ စီစီနဲ့ ၃၀၀၀ စီစီ ဆိုပြီး နှစ်မျိုးလာပါတယ်။ အင်ဂျင် နှစ်ခုလုံးကတော့ ဌင်းရဲ့ ဘရန်ရဲ့ အဲဖတ်၊ အက်စ် စတီမာ၊ ကန်မေရီ တို့လို ကျော်ကြားတဲ့ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ ကား အင်ဂျင်တွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ၂၄၀၀ စီစီ မော်ဒယ်တွေကိုတော့ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးတွေမှာ ပိုပြီး လွယ်ကူပြီး ၃၀၀၀ စီစီတွေကျတော့ ဟိုက်ဝေး လမ်းတွေမှာ ပိုပြီး သုံးလို့ ကောင်းတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၄၀၀ စီစီတွေက ၁၅၈ မြင်းကောင်ရေ ထွက်ပြီး ၃၀၀၀ စီစီတွေကတော့ ၂၁၆ မြင်းကောင်ရေ ထွက်ပါတယ်။ ဆီစားမှုကလည်း သင့်လျော်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌင်းရဲ့ မော်ဒယ်ကွဲ အာအိတ်ခ်ျ မော်ဒယ်တွေမှာ လေအိတ်များ ပြည်ပြည့်စုံစုံ ပါဝင်ပြီး ဒရိုင်ဘာ ဒူးကာ လေအိတ်တွေကအစပါရှိပါတယ်။ ယာဉ် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းချုပ်မှု၊ တိုင်ယာ ဖိအား ထိန်းချုပ်မှု စနစ်၊လိုက်လျော် ညီထွေ ဖြစ်စေတဲ့ ထိပ်မီးသီးတွေနဲ့ အနောက်ကင်မရာတွေပါ ပါရှိပါတယ်။ ထို အနောက် ကင်မရာတွေကတော့ ရှေ့မှာ ပါရှိတဲ့ တီဗီကနေ တစ်ဆင့် ကားပါကင်ထိုးတဲ့ နေရာတွေမှာ အထောက်အကူပြုစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ နှစ်ကနေပြီး ၃ မျိုးလောက်ကွဲပါတယ်။ ပထမမျိုးဆက်မှာ တောင် ကားက တော်တော်ကို အပြင်ပိုင်း အနေနဲ့ ဒီဇိုင်းမှာ ကောင်းမွန်ပြီး ခေတ်ဆန်နေပါတယ်။ မော်ဒယ်သစ်တွေမှာ အနောက်က ကိုယ်ထည် အနည်းငယ်ပိုပြီး ကျစ်လစ်သွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး မီးလုံးတွေ ရှေ့မီးလုံးမှာ အနည်းငယ် ပုံ ပြောင်းသွားပါတယ်။ မီးလုံး နောက်ကို ချွန်ထွက်လာတာ ဖြစ်ပြီး အရင် မော်ဒယ်ဟောင်းမှာ ပါရှိတဲ့ နောက်ကြည့်မှန် အပိုတစ်ခုကို မထည့်တော့ပါဘူး။ ၂၀၁၃ နဲ့ အထက် မော်ဒယ်တွေမှာကတော့ အပြင်ပိုင်း အသွင်အပြင်က အရမ်းကွာသွားပြီး မီးလုံးတွေ ပိုသေးငယ် ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီး အရှေ့ ရှဲယ်တွေလည်း ပုံစံ ပြောင်းသွားပါတယ်။ အနောက်ကတော့ အရင်ကထက်ပိုပြီး ကိုယ်ထည် ကျစ်လစ်သယောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အတွင်း ခန်းတွင်လည်း မော်ဒယ်ကို လိုက်ပြီး များစွာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အရင် မော်ဒယ်ဟောင်းတွေမှာတော့ ဂီယာ ဘောက်ကို ကား ဒတ်ရ်ှဘုတ်မှုာ တစ်ဆက်တည်း သိသိသာသာ တပ်ဆင်ခဲ့ပြီး ကား တံခါး လက်ရန်တွေကို အနည်းငယ် စောင်းနေတဲ့ သဏ္ဍာန် လုပ်ထားပြီး စီယာတိုင်ကအစ ခပ်ရိုးရိုးတွေပါပဲ။ အနောက်ကတော့ သုံးယောက်ထိုင်ခုံပါရှိပြီး ရှန်မ္မိုင်းသားတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၄ မော်ဒယ် ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်တွေမှာကျတော့ ကားစီယာတိုင် လက်ကိုင်တွေကအစ ကျွန်းသားပုံစံ ဟိုက်လိုက်ခ်တွေပါရှိလာပါတယ်။ တံခါးတွေမှာ၊ ဂီယာဘောက်စ်တွေမှာ ကျွန်းရောင် ဟိုက်လိုက်ခ်တွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသွင်အပြင်တွေကလည်း ပိုပြီး ဇိမ်ခံကား ပုံစံပိုပြီး ပေါက်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄ ဟာရီယာတွေမှာတော့ ပိုပြီး ဒီဇိုင်းသစ်လာကာ စီယာတိုင်မှာ ခလုတ်တွေပိုပြီး စုံလင်လာပါတယ်။ ဒတ်ရှ် ဘုတ်တွေကအစ ကွဲခြားသွားပါတယ်။ အင်ဂျင် စက်နှိုးတဲ့အခါ ပတ်ခ်ျစတပ် ခလုတ်တွေ ပါ ပါရှိလာပါတယ်။ တံခါး အသွင်အပြင်တွေလည်း အရင်ကနဲ့မတူ လုံးဝကို ကွဲခြားသွားပါတယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုရင် လူငယ်ကြိုက် စပေါ့စ် ပြိုင်ကားတွေနဲ့တောင် ဆင်တူပါတယ်။ လယ်သာ ထိုင်ခုံတွေပါ ပါရှိလာပါမယ်။
ပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းများ အနေနဲ့ ၂၀၀၇ ဟာရီယာတွင် ယာဉ် တည်ငြိမ်မှု အကူ၊ စက်ရုံထုတ် အလွိုင်းဝှီး၊ နှစ်ဆ ဖြစ်တဲ့ လေအေးပေးမှု ၊ နောက်မှန် အမည်း၊ အော်တို ဟိုက်လိုက်ခ် မီးများ၊ ကလေး ထိုင်ခုံ အကူ၊ လေ အိတ် ၃ အိတ်တို့ ပါရှိပါတယ်။
နိုင်ငံတွင်းတွင် ဂျပန်လေလံမှ တစ်ပတ်ရစ်များကို ၀ယ်ယူ စီးနင်းကြသည့်မှာ များပြားသည့်နည်းတူစွာ ၁၉၉၉၊ ၉၈ ကနေ ၂၀၀၈ လောက်ထိကို ၀ယ်ယူ အသုံးပြုမှု၊ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုများကို တွေ့နိုင်သည့် ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကတော့ မော်ဒယ်၊ ကားဂရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး သိန်း ၁၆၀ လောက်ကနေ သိန်း ၄၀၀ လောက်ထိ ရှိပါတယ်။ တစ်ပတ်ရစ်ကိုမှာဂျပန်လေလံက ၀ယ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ စီးကာ ပြန်ပြီး ရောင်းချနေမှုတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ ဆိုလျှင်တော့ ဈေးနှုန်း မှာ ဌင်းကားကို ၀ယ်ယူရာမှာ ပိုပြီး သက်သာတာကို တွေ့ရပါမယ်။
နိဂုံးချုပ်ရသော် ဟာရီယာလေးတွေဟာ ကားပုံစံ သန့်ပြန့်ပြီး ထင်ရှားမှုကြောင့် လူကြိုက်များကြပါတယ်။ မိသားစု အနေဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူနည်းစုအနေဖြင့် လည်းကောင်း စီးရာမှာ အဆင်ပြေလှတဲ့ ကားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တန်းလွှာ အမျိုးသမီးများနဲ့ လူငယ်များ အကြိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကားတစ်စီးပင် ဖြစ်ပါတယ်။